‘နွမ်းလျခြင်း မရှိပါနဲ့’ | သင်တန်း
မိမိတို့ကိုယ်ကို တလိုတလား ပေးဆက်ကြသူများ—မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ
ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကနေ အကျိုး အပြည့်အဝ ရယူပါ
သမ္မာကျမ်းစာ သုံးပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ တခြားသူတွေကို ကူညီပါ
ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ အာတိတ်စက်ဝိုင်းအနီးမှာ အနှစ် ၅၀ ကြာ အချိန်ပြည့် အမှုဆောင်ခြင်း
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဧပြီ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကမ္ဘောဒီးယား ကာဇက် ကာတာလန် ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကူယူ ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂါ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နီပေါ နော်ဝေး ပန်ဂါဆီနန် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မလေး မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယူရွန် ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူအို ဝါရေး‑ဝါရေး ဝိုလိတ်တာ ဝေယူနာအီကီ ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အိုရိုမို အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အေမာရာ အေးဝေး ဥဇဘက်
“ငါတို့သည် လက်မလျှော့ဘဲ ကောင်းသောအမှုကို ပြုနေကြစို့။”—ဂလ. ၆:၉။
အမှန်တရားဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထက်သန်မှု မပျောက်ဆုံးသွားဖို့ ဘုရားသခင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ပေးထားသလဲ။
အစည်းအဝေးတက်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို စဉ်းစားတာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာလုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးသလဲ။
ဘုရားသခင့်အမှုတော်မှာ ခံနိုင်ရည်ရှိရှိ၊ ထက်ထက်သန်သန် ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သင့်သလဲ။
၁၊ ၂။ ယေဟောဝါရဲ့ စကြဝဠာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရူပါရုံတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာလုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့က ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ စကြဝဠာအဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တကယ်အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ ယေဇကျေလအခန်းကြီး ၁ နဲ့ ဒံယေလအခန်းကြီး ၇ မှာပါတဲ့ ရူပါရုံတွေက ယေဟောဝါဟာ မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်၊ လမ်းညွှန်နေတယ်ဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြတယ်။ ယေရှုက ယေဟောဝါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ မြေကြီးဆိုင်ရာအပိုင်းကို ဦးဆောင်နေတယ်။ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းကို အဓိကအာရုံစိုက်ဖို့၊ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်သူတွေကို လမ်းညွှန်၊ အားပေးဖို့နဲ့ တခြားသူတွေ ယေဟောဝါကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လာအောင် ကူညီပေးဖို့ ယေရှု ဦးဆောင်နေတယ်။ ဒီအချက်က ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။—မ. ၂၄:၄၅။
၂ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီဟာ ကောင်းမြတ်လှတဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ အမီလိုက်နေသလား။ အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထက်သန်မှု တိုးများနေသလား ဒါမှမဟုတ် လျော့နည်းစပြုနေပြီလား။ ဒီမေးခွန်းတွေကို စဉ်းစားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ နွမ်းလျလာတာ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထက်သန်မှု တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတာကို သတိပြုမိကောင်း သတိပြုမိနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမရာစုတုန်းက တမန်တော်ပေါလုဟာ ခရစ်ယာန်ချင်းတွေကို ယေရှုရဲ့ ထက်သန်တဲ့ပုံသက်သေကို စဉ်းစားတွေးတောဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒါက သူတို့ကို “မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိ” ဖို့ ကူညီပေးမယ်လို့ ပေါလုပြောခဲ့တယ်။ (ဟေဗြဲ ၁၂:၃) ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာ ယနေ့ ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ပုံနမူနာက ပထမရာစုမှာရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေအတွက် အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့သလိုပဲ ယနေ့ ယေဟောဝါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပုံနမူနာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထက်သန်မှုနဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို ဆက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ နွမ်းလျမှုမရှိဖို့ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဘာအကြောင်း ဆွေးနွေးကြမလဲ။
၃ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့က နွမ်းလျမှုမရှိချင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီထက်မက လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ ပေါလုပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ “ကောင်းသောအမှုကို ပြုနေ” ဖို့လိုတယ်လို့ သူပြောခဲ့တယ်။ (ဂလ. ၆:၉) ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့ဘက်က လုပ်ဆောင်နေဖို့လိုတယ်။ ထက်သန်မှုရှိပြီး ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အမီလိုက်နေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်ငါးခုကို ဆွေးနွေးကြည့်ကြစို့။ အဲဒီအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိသားစု လုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေတဲ့ ကဏ္ဍတချို့ ရှိမရှိ သိရပါလိမ့်မယ်။
အားပေးမှုနဲ့ ဝတ်ပြုမှုအတွက် စည်းဝေးပါ
၄။ အတူတကွတွေ့ဆုံစည်းဝေးခြင်းက စစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုရေးအတွက် အမြဲ အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်လို့ ဘာကြောင့် ပြောနိုင်သလဲ။
၄ အတူတကွတွေ့ဆုံစည်းဝေးတာက ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေ အမြဲလုပ်နေရတဲ့ အရေးကြီး လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကောင်းကင်မှာဆိုရင် ယေဟောဝါက ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစည်းဝေးတယ်။ (၃ ရာ. ၂၂:၁၉; ယောဘ ၁:၆; ၂:၁; ဒံ. ၇:၁၀) ရှေးခေတ်အစ္စရေးလူတွေဆိုရင် ‘နားထောင်ပြီး သင်ယူနိုင်ဖို့’ စုဝေးကြရတယ်။ (တရား. ၃၁:၁၀-၁၂၊ ကဘ) ပထမရာစုဂျူးတွေဟာ ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ တရားဇရပ်တွေကိုသွားတဲ့ ထုံးစံရှိတယ်။ (လု. ၄:၁၆; တ. ၁၅:၂၁) ခရစ်ယာန်အသင်းတော် တည်ထောင်ပြီးချိန်မှာ အတူတကွစည်းဝေးခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍ ဆက်ဖြစ်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝတ်ပြုရေးမှာလည်း အဲဒါက အလွန်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍ ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ခရစ်ယာန်စစ်တွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် “မေတ္တာစိတ်ရှိ၍ အကျင့်ကောင်းများကျင့်စေရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြ” တယ်။ ယေဟောဝါရဲ့နေ့ရက် နီးလာတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း အားပေးနေဖို့၊ ပိုကြိုးစားအားထုတ်နေဖို့ လိုတယ်။—ဟေဗြဲ ၁၀:၂၄၊ ၂၅။
၅။ အစည်းအဝေးတွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း ဘယ်လိုအားပေးနိုင်သလဲ။
၅ အချင်းချင်း အားပေးနိုင်တဲ့ နည်းတစ်နည်းက အစည်းအဝေးတွေမှာ မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အပိုဒ်ရဲ့မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်တယ်၊ ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကို မှတ်ချက်ပေးနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျမ်းစာမူတွေက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘယ်လိုအကူအညီဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့ တွေ့ကြုံမှုတွေ ပြောပြနိုင်တယ်။ (ဆာ. ၂၂:၂၂; ၄၀:၉) ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအဝေးတွေတက်လာတာ နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ပဲ ကြာနေပြီဖြစ်ပါစေ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုညီအစ်မ ကြီးငယ်မရွေး ပေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အားပေးမှုရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
ယေဟောဝါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ မြေကြီးဆိုင်ရာအပိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့အရာတွေ–
၆။ အစည်းအဝေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကူညီပေးသလဲ။
၆ ပတ်စဉ်စည်းဝေးတွေ၊ စည်းဝေးပွဲတွေနဲ့ စည်းဝေးကြီးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို နည်းလမ်းများစွာနဲ့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ သတ္တိရှိရှိဟောပြောနိုင်ဖို့၊ ရပ်ကွက်မှာကြုံရတဲ့ ဆန့်ကျင်မှု၊ လျစ်လျူရှုမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ (တ. ၄:၂၃၊ ၃၁) ကျမ်းစာကိုအခြေခံတဲ့ ဟောပြောချက်တွေနဲ့ တခြားအပိုင်းတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်ခံ့စေပါတယ်။ (တ. ၁၅:၃၂; ရော. ၁:၁၁၊ ၁၂) ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေနဲ့ အတူရှိနေတာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ စိတ်ငြိမ်သက်မှု ခံစားရစေပါတယ်။ (ဆာ. ၉၄:၁၂၊ ၁၃) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ သွန်သင်ခြင်းကော်မတီက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ ယေဟောဝါကျေးကျွန်တွေရဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာ သွန်သင်တာတွေကို ကြီးကြပ်ပေးတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် အစည်းအဝေးတွေကနေ ရရှိတဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့ သွန်သင်ချက်တွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ကြတယ်။
၇၊ ၈။ (က) အသင်းတော်အစည်းအဝေးတွေရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ (ခ) အစည်းအဝေးတွေက သင့်ကို ဘယ်လို ကူညီပေးသလဲ။
၇ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့က အကျိုးရတာကိုပဲကြည့်ပြီး အစည်းအဝေးတွေတက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအဝေးတက်တဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ယေဟောဝါကို ဝတ်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ (ဆာလံ ၉၅:၆ ကိုဖတ်ပါ။) ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ကို သီချင်းဆိုချီးမွမ်းရတာက အခွင့်ထူးတစ်ခုပါပဲ။ (ကော. ၃:၁၆) ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အစည်းအဝေးတွေမှာ မှတ်ချက်ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း ယေဟောဝါကို ချီးမွမ်းကြတယ်။ ဒီနည်းတွေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာကို ယေဟောဝါ ခံထိုက်ပါတယ်။ (ဗျာ. ၄:၁၁) ဒါကြောင့် “လူအချို့၏ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း အတူတကွစည်းဝေးခြင်းအမှုကို လျစ်လျူမရှုကြ” ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို နှိုးဆော်တိုက်တွန်းတာက အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။—ဟေဗြဲ ၁၀:၂၅။
၈ ဒီဆိုးညစ်တဲ့လောကစနစ်ကို ယေဟောဝါဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကူညီပေးဖို့ ခရစ်ယာန်အစည်းအဝေးတွေကို ယေဟောဝါပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာ သင် သိမြင်ပါသလား။ သိမြင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့က အစည်းအဝေးတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ဘဝရဲ့ “သာ၍အရေးကြီးသောအရာ” တစ်ခုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ (ဖိ. ၁:၁၀) ကျွန်ုပ်တို့မှာ တကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အစည်းအဝေး မပျက်သင့်ဘူး။
၉။ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုသိရသလဲ။
၉ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အပြည့်အဝပါဝင်ခြင်းကလည်း ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အမီလိုက်နေဖို့ ကူညီပေးတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို ယေရှု ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတုန်းက အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ (မ. ၂၈:၁၉၊ ၂၀) အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဟောပြောခြင်းနဲ့ တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းဟာ ယေဟောဝါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းကင်တမန်တွေက ဒီလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ပြီး “ထာဝရအသက်ကိုလိုလားသူ” တွေထံ ကျွန်ုပ်တို့ကို လမ်းညွှန်ပေးနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ကြုံမှုတွေက ဖော်ပြတယ်။ (တ. ၁၃:၄၈; ဗျာ. ၁၄:၆၊ ၇) ယေဟောဝါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ မြေကြီးဆိုင်ရာအပိုင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖွဲ့စည်းပြီး ထောက်မကူညီဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအလုပ်က သင့်အသက်တာရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သလား။
၁၀။ (က) အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာ ပိုခိုင်ခံ့လာအောင် ညီအစ်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ (ခ) အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့ သင့်မေတ္တာ ပိုခိုင်ခံ့လာအောင် အမှုဆောင်လုပ်ငန်းက သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီပေးခဲ့သလဲ။
၁၀ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ထက်ထက်သန်သန် ပါဝင်တဲ့အခါမှာ အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာလည်း ပိုခိုင်ခံ့လာတယ်။ သက်တမ်းကြာ အကြီးအကဲနဲ့ မှန်မှန်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မစ်ချယ်ရဲ့စကားတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ သူ ဒီလိုပြောတယ်– “လူတွေကို အမှန်တရားအကြောင်း ပြောပြရတာကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ကင်းမျှော်စင် ဒါမှမဟုတ် နိုးလော့!မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုကို လေ့လာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါ လထုတ်တိုင်းမှာပါတဲ့ ဉာဏ်ပညာ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျိုးကြောင်းညီညွတ်စွာ တင်ပြထားတာတွေကို အံ့ဩမိတယ်။ ဒီအချက်တွေကို လူတွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ဘယ်လို နှိုးဆွပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိဖို့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာ ကျွန်တော် ပါဝင်ချင်တယ်။” အမှုဆောင်လုပ်ငန်းက သူ့ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာကို ပထမနေရာမှာထားဖို့လည်း ကူညီပေးပြီး ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအတွက်အချိန်ကို အထိခိုက်မခံဘူးလို့ မစ်ချယ်က ပြောပြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဘုရားသခင့်လုပ်ငန်းတော်မှာ အလုပ်များနေတယ်ဆိုရင် ဒီနောက်ဆုံးကာလမှာ ဆက်ပြီး ခံရပ်တည်ကြည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။—၁ ကောရိန္သု ၁၅:၅၈ ကိုဖတ်ပါ။
၁၁။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ပြီး တွေးတောဆင်ခြင်သင့်သလဲ။
၁၁ ကျွန်ုပ်တို့ကို ယေဟောဝါခွန်အားပေးတဲ့ နည်းတစ်နည်းက များပြားလှတဲ့ စာပေတွေကတစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်။ စာပေတစ်ခုကိုဖတ်ပြီး ‘ဒါ ငါတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အချက်ပဲ၊ ငါ့ကိုရည်ရွယ်ပြီး ယေဟောဝါ ရေးထားသလိုပဲ’ လို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကို သင်မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါက မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ယေဟောဝါဟာ ဒီစာပေတွေကတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သွန်သင်ပေး၊ လမ်းညွှန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တော် ဒီလိုပြောတယ်– “ငါက သင့်ကို ထိုးထွင်းဉာဏ်ရှိစေပြီး သွားသင့်တဲ့လမ်းကို သွန်သင်ပေးတယ်။” (ဆာ. ၃၂:၈၊ ကဘ) ကျွန်ုပ်တို့ရရှိတဲ့စာပေအားလုံးကို မလွတ်တမ်းဖတ်ဖို့နဲ့ ဖတ်တဲ့အရာကို တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်သလား။ အဲဒီလိုလုပ်တာက ဒီခက်ခဲကျပ်တည်းတဲ့နောက်ဆုံးကာလမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ဘုရားသခင့်အမှုတော်မှာ ဆက် ထက်သန်နေစေပါလိမ့်မယ်။—ဆာလံ ၁:၁-၃; ၃၅:၂၈; ၁၁၉:၉၇ တို့ကိုဖတ်ပါ။
၁၂။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စာပေတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ ဘာက ကူညီပေးနိုင်သလဲ။
၁၂ ဒီစာပေတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ရရှိနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဒီစာပေတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုတန်ဖိုးထားလာပါလိမ့်မယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ စာပေပြုစုရေးကော်မတီက ရှာဖွေလေ့လာခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ စာပြင်ခြင်း၊ သရုပ်ဖော်ပုံတွေ ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ ပုံနှိပ်ဖို့၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တင်ဖို့ ဘာသာပြန်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကြီးကြပ်တယ်။ ပုံနှိပ်တဲ့ဌာနခွဲတွေက စာပေတွေကို သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အသင်းတော်တွေဆီ ပို့ပေးတယ်။ ဒီအလုပ်တွေကို ဘာကြောင့် လုပ်ဆောင်ရသလဲ။ ယေဟောဝါရဲ့လူတွေ ပုံဆောင်အစာ ဝဝလင်လင် စားသုံးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ (ဟေရှာ. ၆၅:၁၃) ယေဟောဝါရဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတစ်ဆင့် ကျွေးမွေးနေတဲ့ ပုံဆောင်အစာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝီရိယရှိရှိ စားသုံးကြပါစို့။—ဆာ. ၁၁၉:၂၇။
၁၃၊ ၁၄။ ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းကို ကောင်းကင်ကနေပြီး ဘယ်သူတွေ ထောက်မပေးနေသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ကော မြေကြီးပေါ်ကနေ ဘယ်လို ထောက်မပေးနိုင်သလဲ။
၁၃ တမန်တော်ယောဟန်ဟာ ရူပါရုံတစ်ခုမှာ ယေဟောဝါကိုပုန်ကန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းဖို့ ယေရှု မြင်းဖြူစီးလာတာ မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ (ဗျာ. ၁၉:၁၁-၁၅) ကောင်းကင်ကို ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတဲ့ သစ္စာရှိဘိသိက်ခံတွေနဲ့ သစ္စာရှိကောင်းကင်တမန်တွေဟာ မြင်းမြူတွေစီးပြီး ယေရှုနောက် ထက်ကြပ်မကွာလိုက်နေတာကိုလည်း သူတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယေရှုကို သူတို့ ထောက်မကြောင်း ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ (ဗျာ. ၂:၂၆၊ ၂၇) ယေဟောဝါရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထောက်မရာမှာ တကယ်ကောင်းတဲ့ စံနမူနာတစ်ခုပါပဲ။
၁၄ အဲဒီလိုပဲ လူအုပ်ကြီးကလည်း မြေကြီးပေါ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခံညီတော်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို အပြည့်အဝ ထောက်မနေတယ်။ (ဇာခရိ ၈:၂၃ ကိုဖတ်ပါ။) ယေဟောဝါရဲ့အစီအစဉ်တွေကို ထောက်မပေးနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုပြသနိုင်သလဲ။ နည်းတစ်နည်းက ဦးဆောင်နေသူတွေကို လက်အောက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။ (ဟေဗြဲ ၁၃:၇၊ ၁၇) ဒါက ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကနေ အစပြုတယ်။ အသင်းတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုတာတွေက အကြီးအကဲတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တခြားသူတွေ လေးစားအောင် အားပေးမှုဖြစ်စေသလား။ ဒီသစ္စာရှိအမျိုးသားတွေကို လေးစားဖို့နဲ့ သူတို့ပေးတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို နားထောင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သားသမီးတွေကို သင်ပေးသလား။ ဒါ့အပြင် အလှူငွေထည့်ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာချီလုပ်ငန်းကို ငွေကြေးအရထောက်ပံ့ဖို့ မိသားစုလိုက် ဆွေးနွေးသလား။ (သု. ၃:၉; ၁ ကော. ၁၆:၂; ၂ ကော. ၈:၁၂) နိုင်ငံတော်ခန်းမ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးတွေမှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ကူညီပေးသလား။ ဒီလိုလေးစားမှုနဲ့ စည်းလုံးမှုရှိတဲ့နေရာမှာ ယေဟောဝါရဲ့စွမ်းအားတော် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးဆင်းပါတယ်။ ဒီစွမ်းအားတော်က နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ နွမ်းနယ်မှုမရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့ခွန်အားပေးတယ်။—ဟေရှာ. ၄၀:၂၉-၃၁။
၁၅။ မှန်ရာကိုလုပ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် ဆက်တိုက်လှန်နေရမလဲ။
၁၅ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အမီလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံက ယေဟောဝါနှစ်သက်တဲ့နည်းအတိုင်း ဖြစ်ရမယ်။ (ဧ. ၅:၁၀၊ ၁၁) စာတန်၊ ဒီဆိုးညစ်တဲ့လောကနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မစုံလင်မှုက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝမှာ မှန်ရာကိုပြုလုပ်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲစေတယ်။ သင်တို့ထဲက တချို့ဟာ ယေဟောဝါနဲ့ သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ နေ့စဉ် ခက်ခက်ခဲခဲ တိုက်လှန်နေကြရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ သင်တို့ကို ယေဟောဝါ ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ လက်မလျှော့ပါနဲ့။ ယေဟောဝါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီ အသက်ရှင်နေထိုင်တာက ကျွန်ုပ်တို့ကို အကြီးအကျယ် ကျေနပ်မှုခံစားရစေမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝတ်ပြုမှုက အချည်းနှီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။—၁ ကော. ၉:၂၄-၂၇။
၁၆၊ ၁၇။ (က) ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တစ်ခု လုပ်မိတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ (ခ) နွယ်နွယ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသင်ယူနိုင်သလဲ။
၁၆ ဒါပေမဲ့ သင် ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တစ်ခု လုပ်မိတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ချက်ချင်း အကူအညီရယူပါ။ အမှားကိုဖုံးကွယ်ထားတာက အခြေအနေတွေကို ပိုဆိုးဝါးစေပါတယ်။ ဒါဝိဒ်က သူ့အပြစ်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အခါ ‘တစ်နေ့လုံး ညည်းတွားနေရတဲ့အတွက် သူ့အရိုးတွေ ဆွေးမြည့်ကုန်တယ်’ လို့ ပြောခဲ့တာကို သတိရပါ။ (ဆာ. ၃၂:၃) ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု ပျောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပြီး ယေဟောဝါနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတောင် ပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြစ်ကိုဝန်ခံတယ်ဆိုရင် “ကရုဏာတော်ကို ခံရ” လိမ့်မယ်။—သု. ၂၈:၁၃။
၁၇ နွယ်နွယ် * ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ သူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက မှန်မှန်ရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ နှစ်ဘဝစံခဲ့တယ်။ အဲဒါက သူ့ရဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့တယ်။ သူ ဒီလိုပြောပြတယ်– “ကျွန်မ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရတယ်။ တစ်ချိန်လုံး စိတ်ဆင်းရဲပြီး စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။” သူဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ တစ်နေ့ အစည်းအဝေးမှာ ယာကုပ် ၅:၁၄၊ ၁၅ ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ နွယ်နွယ်ဟာ သူအကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပြီး အကြီးအကဲတွေဆီ သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူဟာ နေမကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီး ယေဟောဝါက သူလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါး ပေးခဲ့တယ်။ သူဒီလိုပြောပြတယ်– “ဆေးက မျိုချဖို့အရမ်းခက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်။ အဲဒီကျမ်းချက်မှာပါတဲ့ အကြံပြုချက်ကို ကျွန်မလိုက်လျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် အကျိုးခံစားခဲ့ရတယ်။” နှစ်တွေကုန်လွန်သွားပြီး အခုဆိုရင် နွယ်နွယ်ဟာ ယေဟောဝါရဲ့အမှုတော်ကို ကြည်လင်တဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်နဲ့ ထက်ထက်သန်သန် ပြန် ထမ်းဆောင်နေပါပြီ။
၁၈။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်သလဲ။
၁၈ နောက်ဆုံးကာလမှာအသက်ရှင်ပြီး ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းအဝင် ဖြစ်ရတာက တကယ့်အခွင့်ထူးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲသတိရသင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားတာတွေကို ဘယ်တော့မှ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားမိဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကြစို့။ မိသားစုလိုက် အသင်းတော်အစည်းအဝေးတွေ မှန်မှန်တက်ဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ရပ်ကွက်မှာ ထက်ထက်သန်သန်ဟောပြောဖို့နဲ့ အဖွဲ့အစည်းထုတ်စာပေအားလုံးကနေ အကျိုးရယူဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့။ ဦးဆောင်နေသူတွေကို ထောက်မပြီး ယေဟောဝါနှစ်သက်တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ကြစို့။ ဒီအချက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် ယေဟောဝါရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အမီလိုက်နေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကောင်းမှုပြုရာမှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ နွမ်းလျမှာမဟုတ်ဘူး။
^ စာပိုဒ်၊ 17 နာမည်ကိုပြောင်းထား။
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဧပြီ ၂၀၁၃